महन्थ ठाकुरलाई एक्कासी के भयो ? हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइयो — Sanchar Kendra
१सुदूरपश्चिम : घोडाघोडी नगरपालिका मेयरमा एमाले उम्मेदवारलाई हराउँदै नेकपा समाजवादी विजयी
२मतगणना सकिन नपाउदै देउवाले थाले यत्सो तयारी, प्रचण्डसँग गृह र कानुनमन्त्रीको छलफल
३गुप्तचर मुख्यालयमा रुखको हाँगो भाँचिएर सूचकको मृत्यु
४याे सिजनको सगरमाथा आरोहणमा दुई जनाको ज्यान गयो
५एमालेलाई हराएर एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा जित्यो पहिलो मेयर
६ओलीको गृहनगर दमकको ताजा मतपरिणाम-राप्रपा अघिअघि, एमाले पछिपछि, मतान्तरसहित
७टीकापुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले जित्यो मेयर
८एकाएक कसरी घट्यो बालेन शाहको १० हजार मत ? प्रेस ब्रिफिङमा चिप्लिए…
९भरतपुरमा रेनु दाहाल २ हजार वढि मतले अगाडि
१०एमालेबाट आमा छोरी विजयी
११संरचनात्मक जटिलता भत्काउन क्रान्तिकारी छलाङ मार्न डा.भट्टराईको सुझाव
१२३० वर्षदेखि जेलमा रहेका राजीव गान्धीको हत्यारा रिहा
महन्थ ठाकुरलाई एक्कासी के भयो ? हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइयो
काठमाडौँ ऽ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अचानक अस्वस्थ भएपछि उनलाई ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नवलपरासी र रुपन्देही गएका अध्यक्ष ठाकुर आज अचानक अस्वस्थ भएपछि हेलिकप्टरबाट उनलाई ग्राण्डी अस्पताल ल्याइएको लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य अकवाल अहमदले बताए।
अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ, यहाँका स्थानीय डाक्टरले थप उपचारका लागि काठमाडौँ लग्न भनेपछि हेलिकप्टरबाट ग्राण्डी अस्पताल पठाइएको हो’ उनले भने । अध्यक्ष ठाकुर हिजो नवलपरासीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
आज रुपन्देहीको भैरहवामा पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यतालिका थियो तर बिहान चार बजे अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । अध्यक्ष ठाकुरलाई मुटुसम्बन्धी समस्या छ । उनले नियमित चेकअप गराउन गराइ रहेका थिए ।
त्यस्तै एमालेमा प्रवेश गरेकै भोलिपल्ल्ट माओवादीमै फर्किएका धादिङ रोराङ बेनिघाट गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले परिबन्दले आफू एमालेमा प्रवेश गर्न पुगेको बताएका छन् ।
माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको भोलिपल्टै फेरि उनी माओवादीमै फर्किएका हुन् । माओवादीमा फर्किएको घोषणा गरेपछि बुधबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उनी खुमलटारमा पुगे ।
खुमलटार पुगेर डल्लाकोटीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफू परिबन्दमा परेर बालकोट पुगेको भए पनि पुनः माओवादीमै फर्किएको जानकारी दिएका छन् । एमालेमा प्रवेश गर्नु आफ्नो गल्ती भएको भन्दै उनले एमालेमा गएपछि आफ्ना कार्यकर्ता र जनताले दुई दिनसम्म सुत्नसमेत नदिएको प्रचण्डसामु बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँग डल्लाकोटीले गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने, ‘अध्यक्षज्यु, केही मान्छेको परिबन्दमा परि बालकोट पुगेँ । यसमा मेरो गल्ती भो । तर मलाई मैंले बनाको पार्टी, कार्यकर्ता र मलाई निर्वाचित गर्ने जनताले दुई दिनसम्म छोडेनन्, सुत्न नि दिएनन् ।
मैंले आज मेरा कार्यकर्ता र जनताप्रति गर्व गर्छु । र, म दुई दिनमै घर फर्केको छु ।’ डल्लाकोटीको भनाइपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिए, ‘गल्ती गरेँ भनिसक्नु भो । अब काममा फर्कनुस् ।’